ဣဇာက်ကိုနိူးထမှုနှင့်ဆိုင်သောရူပါရုံတစ်ခု| A Vision of Revival | Real Conversion
ဇူလိုင်လ ( ၃ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
Lord’s Day Evening, July 3, 2016
ဟေရှာယ ၆၄း ၁ ကို အတူတကွ ဖတ်ကြပါစို့။ ၎င်းသည် Scofield Study ကျမ်းစာ တွင် စာမျက်နှာ ၇၆၈ ၌ တွေ့ရသည်။
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍၊ ဆင်းသက် တော်မူပါစေသော။ ရှေ့တော်၌တောင်တို့သည် လှုပ်ကြပါစေ သော။ မီးသည် အမှိုက်ကိုလောင်သကဲ့သို့၎င်း၊ ရေကိုဆူစေသကဲ့ သို့၎င်းဖြစ်ပါစေသော။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ကိုယ်တော်၏ရန်သူတို့သည် နာမတော်ကိုသိ၍၊ ရှေ့တော်၌ လူအမျိုးမျိုးတို့သည် တုန်လှုပ်ကြ ပါလိမ့်မည်။ အကျွန်ုပ်တို့မြော်လင့်သည်ထက်၊ အံ့ဘွယ်သောအမှု တို့ကို ပြုတော်မူသောအခါ၊ ဆင်းသက်တော်မူ၍ တောင်တို့သည် ရှေ့တော်၌လှုပ်ကြပါ၏။ ကိုယ်တော်ကိုမြော်လင့်သောသူတို့အဖို့ အလို့ငှါ ကျေးဇူးပြုတော်မူသောဘုရား၊ ကိုယ်တော်မှတပါး အခြား သောဘုရားသခင်ကို ကမ္ဘာဦးမှစ၍ အဘယ်သူမျှမကြားမသိပါ။ နားဖြင့်မကြား၊ မျက်စိဖြင့်မမြင်စဖူးပါ။ ” ( (ဟေရှာယ ၆၄း ၁- ၄ )
နိူးထမှုသည် ရှေးဦးစွာ ပြောင်းလဲပြီးသောသူများ၏အသက်တာတွင် ရောက်ရှိလာပါ သည်။ သို့သော် သူတို့သည် မိမိတို့အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကို သတိမမူမိကြပါ။သူတို့သည် အကျင့်သီလမပါဘဲ ဘုရားကျောင်းသို့လာကြပါသည်။ဘုရားသ ခင့်မျက်မှောက်တော်တွင် အဓိပါယ်မဲ့အသက်ရှင်ကြပါသည်။ သူတို့ဆုတောင်းသော်လည်း စကားပြောသည့်အလားသာဖြစ်နေပါသည်။ သူတို့တောင်းသောဆုတောင်း ဘုရားသခင်နား ညောင်းသည့်သဘောကို မတွေ့ရပါ။ သူတို့ဆုတောင်းခြင်းအသံကို ဘုရားသခင်နားညောင်း မည်ဟုပင် မထင်ရပါ။ ဘုရားသခင်က သူတို့ကို နားထောင်မည်ဟုပင် မထင်မိပါ။ သူတို့သည် ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင် တိတ်တိတ်လေးဆုတောင်းကြနိူင်ပါသည်။သူတို့ဆုတောင်းခြင်း သည် တန်ခိုးပါနိူင်သည်။သို့သော် အတွင်းစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းအလျဉ်းမရှိပါ။ နိူးထမှုတွင် ဆုတောင်းခြင်းကို တန်ခိုးဖြင့်ဦးဆောင်သောသူတို့သည် “မကြားနိူင်အောင် သူတို့ပြုသောဒုစ ရိုက်သည် မျက်နှာတော်ကိုလွှဲစေတော်မူသည်” (ဟေရှာယ ၅၉း ၁ ) ဟူသောအချက်ကို ဦးစွာ သတိပြုရပါမည်။
နိူးထမှုသည် ခရစ်ယာန်ကောင်းအချို့တို့က မိမိတို့အပြစ်သည် သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ခြင်းတို့ကို ဆုံးရှုံးသည်ဟု ခံစားရသောအချိန်တွင်အစ ပြုလာပါသည်။ နိူးထမှုကြီးအကြောင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာကို ခဏတာဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ အဘယ် သို့အစပြုခဲ့သနည်း။ စနေနေ့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင် အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေရာ တွင် ပုံမှန်ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ရှိသည်။ သို့သော် အစည်းအဝေးတွင် ဘုရားသခင်၏မျက် မှောက်တော်မရှိပါ။ “သင်းအုပ်တစ်ယောက်သည် စိတ်နှလုံးကျိုးပဲ့ပြီး ငိုကြွေးလာသည်။ထိုအ ရာမှာ ပုံမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။” သူသည် လူများရှေ့တွင် “သူ့စိတ်နှလုံးခိုင်မာကြောင်း” ဝန်ခံ သွားခဲ့သည်။ သူသည် မျက်ရည်စက်များဖြင့် ပြောနေသောကြောင့် အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းသ ဘောသည် ”အစည်းအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် ပူဆွေးခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း များဖြစ်လာပါသည်။” သူတို့အားလုံးသည် ပျောင်းလဲသူများဖြစ်ကြပါသည်။ သင်းအုပ်ဆရာ၏ ဖွင့်ဟဝန်ခံခြင်းက သူတို့သည်လည်း ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးရှိကြကြောင်းကို သတိပြုမိလာစေ သည်။ “အစည်းအဝေးသည် နံနက်နှစ်ချက်တည်းအချိန်အထိဖြစ်လေသည်။..သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကျရောက်သည့် နောက်ဆုံးအဆင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။”
ကျွန်ုပ်သည် နိူးထမှုအကြောင်းကိုတင်ပြသောအခါ ဤနေရာတွင် ရှိနေကြသော သင်တို့အချို့သည် နားလည်ဟန်မတူကြပါ။ အကြောင်းမှာ သင်တို့သည် နိူးထမှုအကြောင်းကို မမြင်ဘူးကြပါ။ အဘယ်အရာလွဲခြော်နေကြသည်ကို လည်း မသိကြပါ။ John Cagan က ကျွန်ုပ်အား ကျွန်ုပ် “မြည်းစမ်း” ခဲ့သည်ဖြစ်၍ နိူးထမှုကို အလိုရှိသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် သည် နိူးထမှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ “အရသာ” ကိုကြိုက်နှစ်သက်သဖြင့် နောက်တဖန် အ လိုရှိပါသည်။ သင်သည် တခါတလေတောင်မှ မမြည်းစမ်းသေးသည်ဖြစ်၍ “သင်းအုပ်ပြောနေ သောအရာကိုသင်တို့မသိကြပါ။” “အဘယ့်ကြောင့် တသွက်သွက်ပြောနေသည်ကိုလည်း မသိ ကြပါ။ ထိုအရသာကိုသိရှိပြီးသားဖြစ်လျှင် သင်လည်း အလိုရှိမည်ဖြစ်သည်။ တမ်းတနေမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌ မျက်မှောက်တော်ကျရောက်လာသည်ကို တောင့်တနေမည်ဖြစ် သည်။
ဒီမနက်တွင် “နယူးနှစ်ခြင်းတဲတော်” အကြောင်း ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်သစ်ကို မဖန်ဆင်းနိူင်ပါ။ အ သင်းတော်၏ “နည်းလမ်းများ” ကို မဖန်တီးနိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသစ်သောအသက်တာရှိရ မည်။ အသက်တာသစ်ဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်ထံက လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ A. W. Tozer က “ဘုရားသခင်သည် အသက်ကိုပေးသော်လည်း အသက်တာဟောင်းကိုတော့ ဖာ ထေးမပေးဘူး။ သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ပို့ပေးသည်။ အကြောင်းမှာ အသက်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆပ်စပ်မှုရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည် အသက်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပေ သည်” ဟုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသားများကို ပြန်လည်မပြုပြင်လျှင်၊ အသစ်ဖန်ဆင်း ခြင်းမရှိလျှင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ရစ်နှောင်ထားခြင်းမရှိလျှင်“အသစ်သော” နှစ်ခြင်းတဲတော်ကို တည်ဆောက်နိူင်မှာ မဟုတ်ပါ။ ဤသို့ဖော်ပြထားသောအရာတစ်ခုရှိပါ သည်။ ထိုစကားတစ်ခွန်းမှာ နိူးထမႈဖြစ်ပါသည်။ နိူးထမှုဟူသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အခြေပြုကျမ်း တွင် ဟေရှာယတောင်းနေသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ရူပါရုံကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ” ဟူ၍ သီဆိုခြင်းကို မရပ်တန့်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် လှည့်လည်ရင်း ထိုသီချင်းကို သီဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် တရားဒေသနာကိုဟောပြောနေစဉ် တွင် ထိုသီချင်းကို သီဆိုရသည်။ တစ်နေကုန်သီဆိုနေသည်ဟု မိမိကိုယ် ထင်ရသည်။ အိပ် ယာဝင်သွားပြီဖြစ်၍ မိမိကိုယ်ကိုသီဆိုသောအခါ ရည်ကြာသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အလင်းရဖို့ရန် ဘုန်းတော်ဖြင့် လွှမ်းခြုံပါ။
(“ကျွန်ုပ်ရူပါရုကို ဖြည့်ပေးပါ၊ ” Avis Burgeson Christiansen, ၁၈၉၅- ၁၉၈၅ )
ဟေရှာယက“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍၊ ဆင်းသက်တော်မူပါစေသော်။ ရှေ့တော်၌ တောင်တို့သည် လှုပ်ကြပါစေသော” (ဟေရှာယ ၆၄း ၁) ဟု ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Lloyd-Jones က “နိူးထမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဆုတောင်းချက်” ဟု ခေါ်တွင် သည်။ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, ၁၉၉၂၊ စာ- ၃၀၅ )
လော့အိန်ဂျယ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ဖြစ်သော ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် သို့ရောက် ရှိလာသောနိူးထမှုအကြောင်း ဂျာနယ်ကို မထိန်းသိမ်းခဲ့သည်အတွက် အလွန်ပဲ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ထိုအရာက အဘယ်သို့ဆုတောင်းရမည်ဟူသောအချက်ကို ရိုးတိုးရိတ် တိတ်ပြညွှန်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားချက် ကိုလည်း မှတ်သား မထားပါ။ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိူင်သည့်အကောင်းဆုံးအရာမှာ အခြားနိူး ထမှုကို နင့်အား ပြသစ ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်တစ်ခုမှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်း တော်တွင် တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့သောအကြောင်းအရာနှင့်ထပ်တူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် Rev. David Davies က ပေးထားခဲ့ပါသည်။ ထိုအရာထဲက ကောက်နှုတ် တင်ပြပါမည်။ Rev. Davies က ဤသို့ဆိုသည်။
ဤသည်မှာ ဧဝံဂေလိစည်းဝေးပွဲမဟုတ်ပါ။ ဒဏ်ရာပလပွ လည်းမဟုတ်ပါ။နိူးထမှုဟူသည်မှာ မျက်မှောက်တော်တွင် ဘုရား သခင်ဆင်းကြွလာသည့်အချိန်တွင် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်သောနယ်မြေတွင် အသင်းပေါင်း များစွာကိုခေါင်းဆောင်လုပ်ဖူးပါတယ်။ သူတို့သည် များစွာသော အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရင်းအလွန်ပဲ အလုပ်ရှုတ်သောသူများဖြစ်ကြပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွေ့အကြုံများစွာရှိပါသည်။ သို့သော် လူတို့ သည် အေးတိအေးစက်ဖြစ်နေကြပါသည်။ သူတို့သည် အရင်လို ဘဲ ဘုရားဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲသို့ အေးတိအေးစက်သာလာကြပါ သည်။ သံသယပါသောကယ်တင်ခြင်းမပါဘဲ လူတို့သည် ကယ် တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ သို့သော် လိုအပ်ချက်ရှိနေသေး သည်။ တရားဟောဆရာတစ်ယောက်က ငါ့ကိုပြောဖူးသည်မှာ “ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြင်းပန်းတော့ ကြည့်ကောင်းကြပါသည်” ဟုဆိုပါသည်။ (ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်စကားမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ် တွင် လိုအပ်ချက်ရှိနေသည်ဟု တခါတရံ ခံစားဖူးပါသလား။ )
လူတစ်ဦးက ခေါင်းဆောင်များကို တစ်လလျှင် တစ်ရက် လောက် ဆုတောင်းခြင်းတွင် အချိန်သုံးရန် တောင်းဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အ တွက် မီးဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သဘောပေါက် လာကြပါသည်။ မှားယွင်းသောဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း၊ တစ်ဦးကို တစ်ဦး မှန်ကန်သောဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း သတိပြုမိလာကြပါ သည်။
နိူးထမှုသည် စနေ့ည ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းနှင့် ဆုတောင်း ခြင်းအစီအစဉ်မှအစပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံ တမန်တော် ဝတ္ထုကို လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကနဦးအသင်းတော်၌ ဘုရားသ ခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအား ဦးတည်ထားသောနေရာပင်ဖြစ် ပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းတွင် လွတ်လပ်မှုမရှိကြောင်းကိုလည်း ကောင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်သည် အေးတိအေးစက်ဖြစ်နေ ကြောင်းကိုလည်းကောင်း တရားဟောသူများက သတိပြုမိကြပါ သည်။ ထို့နောက် သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးက စိတ်နှလုံးကျိုးပဲ့ပြီး ငို ကြွေးခဲ့သည်။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမဟုတ်သောအခြေအနေပင်ဖြစ်ပါ သည်။ သူ့စိတ်နှလုံးခိုင်မာကြောင်းကို သူကရှင်းပြသည်။ သူပြော နေသည်အတိုင်း အပြစ်အကြောင်းကို နှံ့ပြန့်စွာ နားလည်လာမှု ဖြစ်လာသည်။ စိတ်နှလုံးနူးညံ့သည်အထိ၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းသည် အထိ အစည်းအဝေးက ပြီးဆုံးသွားပါသည်။ လူတို့သည် မျက်နှာ တွင် မျက်ရည်များစီးကျသည်တိုင်အောင် ဆုတောင်းလျက် ငို ကြွေးမြည်တမ်းနေကြပါသည်။ စပါဂျွန်က တစ်နေ့တွင် “သခင်ဘု ရား၊ ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသောရိုက်ခိုက်သည့်အချိန်ကာလကို ဖြစ်စေပါ” ဟု ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်များသည် အရာ တိုင်းကို အောက်သို့ချပြီး ကျဆုံးခဲ့ကြသည်။အစည်းအဝေးသည် မနက်ပိုင်း နှစ်ချက်တီးအချိန်အထိဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့အစ်ကိုကိုယ်တိုင်က နိူးထမှုအကြောင်းကို ကြားသိ ခဲ့ပြီး ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုသဘောကို တွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် နိူးထမှုအတွက် ဆု တောင်းနေသည်။ သူက ထိုအရာသည် သူအလိုရှိသောနိူးထမှု မ ဟုတ်ကြောင်း ဘုရားသခင်အား ပြောပြသည်။ ထို့နောက် ဘုရား သခင်က သူ၏မယုံကြည်သော ခိုင်မာသည့်စိတ်နှလုံးကို နိူးထမှုမီး က လောင်းကျွမ်းစေကြောင်း ပြောသည်။ ထိုအချက်ကြောင့် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အစည်းအဝေးပေါ်တွင် သက်ရောက် လာသည်။ (ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်။ ဘုရားသခင်က ထိုအထဲတွင် ကျိုး ပဲ့ကြေမွစေပြီး စပါဂျွန်က “ကစင့်ကလျားဖြစ်ခြင်း” ဟုခေါ်သောအ ရာဖြစ်ပေါ်နေသည်။ )
Rev. Davies က ဤသို့ဆိုပြန်သည်။
ကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပျက်နေ သောအရာကိုဖော်ပြဖို့အတွက် အလွန်အကျူးပြုလုပ်သောဘာ သာစကားကို ကျွန်ုပ်အစ်ကိုအသုံးပြုသောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်ဒုက္ခ ရောက်နေသည်။ သို့သော် နိူးထမှုဟူသည် အမြဲကွဲပြားခြားနား လျက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် လူတို့စီစဉ်ထားသော အစီအမံမဟုတ်ပါ။ နိူးထမှုသည် ခြုံလောင်သောမီးကဲ့သို့ပင် မိုင် ပေါင်းရာနှင့်ချီ၍ ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ အခြားအသင်းတော်များကိုလည် ထိတွေ့စေပါသည်။
လူငယ်တရားဟောဆရာလေးက တန်ခိုးပါသောတရားဒေ သနာကိုဟောပြောသည်။ သို့သော် အဘယ်အရာမျှ ဖြစ်မလာပါ။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးတေးသီချင်းကိုသီဆိုပြီး အစီအစဉ်ကို ဆု တောင်းခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်သည်။ အသင်းသားများက ထွက်ခွါ သွားသောအခါ လူငယ်ဆရာလေးတစ်ပါးသည်လာ၍ ရှေ့တွင် ထိုင်သည်။ သူသည် ဆီးမရတားမရ ရှိုက်သံတသဲသဲ ငိုကြွေးနေ သည်။လူငယ် ကောင်မလေးက “အဘယ်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ အ ဘယ်သို့လုပ်ရမည်နည်း၊ ငါ ငရဲသွားရတော့မှာ” ဟု အော်ဟစ်နေ သည်။ လူတို့သည် ဘုရားကျောင်းဘက်သို့ ပြန်လှည့်လာကြပါ သည်။ ကောင်မလေးသည် ခရစ်ယာန်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် သိရှိကြသည်။ သို့သော် သူသည် အပြစ်ကို အမှန်တကယ် သိမြင် လာသည်။ ကောင်မလေးသည် တကိုယ်ကောင်းဆန်သောစိတ်၊ နည်းနည်းလေးမှ များများကြီးဖြင့် တကိုယ်ကောင်းဆန်ပါသည်။ ထိုအရာက သူ့ကို ထိတ်လန့်စေသည်။
လူတစ်ယောက်က အိမ်တွင် မိန်းမက ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိ ကြောင်းပြောလာသောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်သည် ငိုနေသောသူတို့ ကို အကူအညီပေးလျက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ငိုကြွေးမြည်တမ်း လျက် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် လျောင်းနေသော ခရစ်ယာန်ကောင်း တစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ထိုသူက အဘယ်သို့ပြုမည် နည်း။ အဘယ်သို့ပြုမည်နည်း” ဟု အော်ဟစ်နေသည်။ ခဏကြာ သော် သူသည် မိမိအပြစ်ကို ဝန်ချလျက် ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် “ကျွန်ုပ်စိတ်သည် အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရပြီ” ဟု အော်ဟစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အခြားအစည်းအ ဝေးဆီသို့ပြန်လှည့်ကြပါသည်။ နောက်နေ့တွင် အပြစ်ဝန်ချသော နေ့ရက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တည့်မြတ် သည့်နေ့ပင်ဖြစ်လာပါသည်။ ရုတ်တရက်ပါဘဲ ဘုရားသခင်သည် ကြွဆင်းလာပြီး ကောင်းကင်မှ အလည်အပတ်ရောက်လာခြင်းဖြစ် ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိန်းချုပ်ခြင်းသူများမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင် သာလျှင် အရာခပ်သိမ်းကို ထိန်းချုပ်သူဖြစ်ပါသည်။ အရာအားလုံး သည် စုံလင်မှုအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမနေ့ရက်တွင် အသင်း တော်ခေါင်းဆောင်များသည် ထိခိုက်နာကျင်နေကြရသည်ဟု သတိပြုမိပါသည်။ ဒုတိယနေ့တွင် အပြစ်ကိုသိမြင်လာသူများမှာ အလုပ်သမားများပင်ဖြစ်ပါသည်။ တတိယနေ့တွင် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ စတုတ္ထနေ့တွင် ကျောင်းသားများ၊ ပဥ္စမနေ့တွင် ကျောင်းသူများဖြစ်ကြပါသည်။ တရားဟောသူများသည် ဘုရားသ ခင်၏အလုပ်ကိုကြည့်ရှုနေသည့် ကြည့်ရှုသူကဲ့သို့ နေနေကြပါ သည်။
ယခုအချိန်တွင် ပြောင်းလဲလာသောသူများကြားတွင် နိူးထမှု သည် ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ မယုံကြည်သောသူအနည်းငယ် သာလျှင် ပထမနှစ်လသုံးလတွင် ပြောင်းလဲလာကြသည်။ ဘုရား သခင်သည် ရှေးဦးစွာ အသင်းတော်ကို ဆေးကြောသည်။ နှလုံး သားများကို စစ်ကြောပါသည်။ လူအချို့တို့က နှစ်ပေါင်းများစွာ သို ထားသောအပြစ်ကိုပြုကြပါသည်။ ထိုအပြစ်သည် ကိစ္စမရှိဟုဆို လျက် အဘယ်သူကိုမျှ မသိစေကြပါ။ ဘုရားသခင်သည် တစ်ဦး ချင်းစီအား နာကျင်စေသည်။ ကြီးမားခိုင်မာသောတရားဟောသူ ကို လက်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ မျက်ရည်ချောင်းစီးစေလျက် မရ မကယူသည်။ ထိုသူသည် လူများစွာအား ခရစ်တော်ထံသို့ပို့ ဆောင်ပါသည်။ သို့သော် သူသည် ဝန်ခံစရာအပြစ်ကိုတွေ့ထား သည်။ သူသည် အသင်းတော်ကြားထဲတွင် ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းမ ရှိသ၍ ငြိမ်သက်ခြင်းမရရှိနိူင်ပါ။ သူ၏စကားလုံးများသည် အီလက်ထရစ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး လူတို့အား ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် နောင်တ စိတ်ဖြင့် လွင့်ကျစေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် တမြို့လုံးသည် ဘုရား သခင်အကြောင်းကိုသာပြောနေကြပါသည်။ (ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်။ ခရစ်ယာန်များသည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အမှန်တ ကယ်ချစ်လာကြသောအခါ ပျောက်ဆုံးသူများကို ဖိအားပေးထား သည်။ )
တခါတရံ အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းသည်လည်း ကြောက်မက်ဖွယ် သောအရာဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းစွာ တွန်းလှန်သောသူများသည် ၎င်း တို့ခံစားနေရသောအပြစ်များကို ဝန်ခံကြပါသည်။ လူတစ် ယောက်က လက်ကမ်းထားပါသည်။ မိန်းမကြီးတစ်ဦးက သူသည် မိမိအပြစ်ကို လူအများရှေ့မှောက်တွင် ဝန်ခံထားခြင်းမပြုသ၍ ကာလပတ်လုံး အပြစ်ကိုသိမြင်သည့် အောက်တွင်သာ သွားနေ သည်။ ၎င်းသည် မိမိအပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီး ဘုရားသခင်၏မျက် မှောက်တော်ကို တွန်းလှန်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ရန် ကြိုးစားထား သူတို့အတွက် ဆုလဒ်ဖြစ်သည်။ သဘာ၀ဖြစ်စဉ်သည် အလျှင်အ မြန်ပျောက်သွားသည်။ နိူးထမှု၏ နောက်ဆုံးအသီးအပွင့်မှာ သန့် ရှင်းခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ နှုတ်ကပါတ်တော်နှင့်ဆုတောင်းခြင်း ကို ချစ်မြတ်နိူးခြင်း၊ ခရစ်တော်၏ပုဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း ကို ချီးမြှောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ (ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်။ ခရစ်ယာန် များသည် ၎င်းတို့၏အားနည်းချက်များကို ချွတ်ပယ်ပြီး တစ်ဦးအ ပေါ်တစ်ဦး အမှန်မေတ္တာထားသောအခါ ၎င်းက အသင်းတော် တွင် အသစ်သောနူးညံ့ခြင်းနှင့်မေတ္တာကို ပွါးစေသည်။ တကိုယ် ကောင်းဆန်သည့်အကျင့်ဟောင်း၊ ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့် ဘက် လိုက်မှုများကို စစ်မှန်သော သနားခြင်းနှင့်မေတ္တာတို့ဖြင့် အစားထိုး လာပါလိမ့်မည်။)
လူတိုင်း အစည်းအဝေးသို့လာကြသည်။ ထိုနေရာသည် အ လွန်ပင် ဝေးကွာသောနေရာဖြစ်သတည်း။ အစည်းအဝေးကို နံနက်ပိုင်းတွင် ၆း ၃၀ တွင် စတင်ရန်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ နေ့လည် အချိန်အထိပင် ရောက်ပါသည်။ လူတွေက တိုးတိုးတိတ်တိတ် လေးပြောကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သာ၍ နီးသည် ဟု ခံစားကြပါသည်။ လူတစ်ယောက်က “ဘုရားသခင်၏ မျက် မှောက်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ရစ်ပတ်နေသည်” ဟု ဆိုပါသည်။ ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ရန် သင်ကြောက်ရွံ့နေသော အမှန်တကယ် ဘုရားသခင်အစစ်အမှန်ရောက်နေသောအစည်းအဝေးတွင် ကျွန် တော်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကို ယောဘ ၄၂း ၅ “ကျွန်ုပ်နားသည် ကိုယ်တော်ကိုကြားပါ၏။ သို့သော် ကျွန်ုပ်မျက်စိသည် မြင်ရပါ၏” ဟု သတိပေးလျက်ရှိပါသည်။
လူတို့သည် အရင်နှင့်မတူဘဲ ဆုတောင်းလာကြသည်။ တပြိုင်တည်းဆုတောင်းခြင်းသည် နိူးထမှုတွင် ဖြစ်ပျက်သောအ ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အစီအစဉ်မဲ့ ကစဉ့်ကလျားတော့မဖြစ် ပါ။ လူတို့သည်လည်း ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းအတွက် စိတ်အားထက် သန်မှုရှိကြသည်။ လူတို့သည် ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ ရာပေါင်းများ စွာ ပြောင်းလဲလာကြသည်။ (ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက် သည်ကို နိူးထမှုနှစ်ခုစလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်။)
Rev. Davies က ဤသို့ဆိုသည်။
ခိုင်မြဲပါရဲ့လား။ ကျွန်ုပ်သည် မှတ်တမ်းကို ရှစ်လကြာထိန်း သိမ်းထားသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတိုင်အောင် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးသည် ရှိလျက်နေသည်။ နောက် နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကြာမြင့် လာသောအခါ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များသည် နိူးထမှုအား ဖြင့် ကောင်းကြီးခံစားရသူများဖြစ်လာကြပါသည်။ မိမိလိုအပ်ချက် များဖြင့်ရှိနေကြသော မျိုးဆက်များရှိလျက်နေကြပါသေးသည်။ အ ကြောင်းမှာ “သခင်ဘုရားကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဂျူးလူမျိုးများအ တွက် သခင်ဘုရားလုပ်ဆောင်ထားသောအရာကိုသော်လည်း ကောင်းလုံးဝမသိနားမလည်သော ဂျူးအခြားမျိုးဆက်များရှိနေကြ ပါသေးသည်။” (တရားသူကြီး ၂း ၁၀ ) သင့်အသက်တာထဲမှာ အ မှန်တကယ်ဝင်ရောက်လာဖို့ လိုလာတောင့်တမှုမရှိလျှင်၊ “မိမိတို့ အပြစ်ကိုဝန်ချ၍၊ တစ်ဦးအတွက် တစ်ဦးက ဆုတောင်းခြင်းမပြုသ ၍”၊ နိူးထမှုသည် သင်တို့အသင်းတော်တွင် ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။” (ယာကုပ် ၅း ၁၆ )
ဤစာရင်းမှာ Rev. David Davies ထံမှ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်က အချို့နေရာများတွင် အဓိပါယ် သာ၍ပေါ်လွင်အောင် ပြုပြင်ပြီး အချို့တွင် သာ၍ နားလည်လွယ်ဖို့အတွက် အချို့ စကားလုံးများကို ချန်လှစ်ထားလိုက်ပါသည်။ Brian H. Edwards, Revival! A People Saturated With God, Evangelical Press, ၁၉၉၁၊ စာ- ၂၅၈- ၂၆၂ မှ ကောက်နှုတ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Rev. Davies က “ဘုရားသခင်သည် နိူးထမှုတန်ခိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အလယ်ဆင်းကြွလာသော အခါ သင်စိတ်ကူးထားသောအရာနှင့် အလွန်ပင် ကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိပါသည်။ နိူးထမှုဟူ သည်မှာ မိမိမျက်မှောက်တော်ထဲ ဘုရားသခင်ဆင်းကြွလာသောအချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ အသင်း တော်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်သည် အသက်တာကျိုးပဲ့ကြေမွပြီး ငိုးကြွေးသည့်အချိန်တွင် စတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံးရှိကြောင်းကို ရှင်းပြသည်။ သူက မိမိအ ပြစ်မြင်သည့်အကြောင်းကို ရှင်းပြသောကြောင့် ထိုအကြောင်းသည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းရှိ သည်တိုင်အောင် ပြောင်းလဲပြီးသောလူများကြားတွင် ပျံ့နှံ့လာသည်။ လူတို့သည် ငိုကြွေးရင်း ဆုတောင်းရင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးသည် နံနက် နှစ်ချက်တီးအချိန်တိုင်အောင် ရောက်လျက် ရှိသည်။
ဤသည်မှာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သော နိူး ထမှုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ နိူးထမှု၏ပုံရိပ်များမှာ မျက်ရည်စက်များ၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ နှင့် အ သင်းတော်တစ်ခုလုံးရှေ့မှောက်တွင် မိမိအပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ ခါရိစ္စမက်တစ် သို့မဟုတ် ပင်္တေကုတ္တိအသင်းတော်များနှင့် အလွန်ပင်ခြားနားသည်။ ဤနေရာ တွင် “အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်း” သို့မဟုတ် အနာငြိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အထူးတီး ခတ်သော တေးဂီတ များ မပါဝင်ပါ။ “ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း” လည်းမရှိပါ။ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြစ်လွှတ်ရန် တောင်းဆိုခြင်းသာဖြစ် ပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာလာသောအခါ အသင်းသားမဟုတ်သူများသည်လည်း ရောက်ရှိလာကြပြီး ပြောင်းလဲလာကြသည်။ John Cagan က ပျောက်ဆုံးသူများ အဘယ်သို့ ကယ်တင်ခြင်းရသည်အကြောင်းကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ အဖြေပေးဖို့ အတော်ကို ခက်လှပါ သည်။ လူတို့သည် မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုဝင်များကို ခေါ်လာကြသည်။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထား ခြင်းလည်း မရှိပါ။ သို့ပေမယ့် ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် လူပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်သည် တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သို့ရောက်လာကြပြီး ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ သည်။ ထို့နောက် နှစ်ခြင်းကို ခံယူကြသဖြင့် ခိုင်မာသောအသင်းသားများဖြစ်လာကြပါသည်။ ယနေ့တွင် ရာပေါင်းများစွာတို့သည် အသင်းတော်တွင် ရှိလျက်နေကြသေးသည်။ ထိုသို့ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်လေးပါး ပေါ်ထွက်လာပါသည်။
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍၊ ဆင်းသက် တော်မူပါစေသော။ ရှေ့တော်၌တောင်တို့သည် လှုပ်ကြပါစေ သော။ မီးသည် အမှိုက်ကိုလောင်သကဲ့သို့၎င်း၊ ရေကိုဆူစေသကဲ့ သို့၎င်းဖြစ်ပါစေသော။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ကိုယ်တော်၏ရန်သူတို့သည် နာမတော်ကိုသိ၍၊ ရှေ့တော်၌ လူအမျိုးမျိုးတို့သည် တုန်လှုပ်ကြ ပါလိမ့်မည်။ အကျွန်ုပ်တို့မြော်လင့်သည်ထက်၊ အံ့ဘွယ်သောအမှု တို့ကို ပြုတော်မူသောအခါ၊ ဆင်းသက်တော်မူ၍ တောင်တို့သည် ရှေ့တော်၌လှုပ်ကြပါ၏။” ( (ဟေရှာယ ၆၄း ၁- ၃ )
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီချင်းနံပါတ် ၈ ကို သီဆိုကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်ရူပါရုံကိုဖြည့်ဆည်းပါ၊ ကယ်တင်ရှင် ၊ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏
ဘုန်းတော်ရောင်ခြည် ကျွန်ုပ်အား လွှမ်းခြုံထားပါ၏။
ကျွန်ုပ်ရူပါရုံကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ၊ လိုအင်တိုင်းမှာ
ကိုယ်တော့်ဘုန်းအတွက် စောင့်ထိန်းပါ၊ ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အား မှုတ်သွင်းပါ။
ကျွန်ုပ်သွားရာလမ်းကို ကိုယ်တော့်အလင်းဖြင့် လင်းစေမူပါ။
(“ကျွန်ုပ်ရူပါရုံအားဖြည့်ဆည်းပေးပါ”၊ Avis Burgeson Christiansen ၁၈၉၅-၁၉၈၅)
နိူးထမှုကိုစေလွှတ်ရန် ဘုရားသခင်အား တောင်းသောဆုကို ရပ်တန့်မသွားပါစေနှင့်။ ကောင်းကင်တံခါးကိုဖွင့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မျက်မှောက်တော်တွင် ထင်ရှားရန် ဘုရားသခင် အား တောင်းလျှောက်ခြင်းကို မရပ်တန့်စေပါနှင့်။ “တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ပြုသော အမှားများကို ဝန်ခံရန်၊ အနာငြိမ်းစေခြင်းငှါ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ဆုတောင်းခြင်း” ကို ရပ်တန့်မှုမပြုပါနှင့်။ (ယာကုပ် ၅း ၁၆ ) ဤသည်တို့မှာ တရုတ်နိူင်ငံနှင့်အခြားနေရာများ တွင် ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသော နိူးထမှု၏ပုံရိပ်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဆင်းကြွလာ ပြီး ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးများကို ကုသပြီး အလွန်တန်ခိုးပါသော တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ဖြစ်လာစေရန် အသစ်သော စိတ်နှလုံးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Aaron Yancy နှင့် John Cagan တို့အား ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အလယ်ဆင်းကြွပြီး တည်ရှိရန် ဆုတောင်း ဦးဆောင်စေလိုပါသည်။ Aaron က ပထမဆုံးဦးဆောင်ပြီး John က နောက်တွင် ဦးဆောင် မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဦးဆောင်မည့်သူ ရှိသေးသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး မတ်တပ်ရပ် ဆု တောင်းပါ။
ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုယ်စား လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံရန် ဤ လောကသို့ကြွလာခဲ့သည်။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းကို မရရှိသေးလျှင် သင်၏အပြစ်ရှိပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန်သည့်အသက်တာပုံစံကနေ ရုန်းထွက်ရမည်။ သင်သည် နောင်တရပြီး ဘုရားသခင်၏တဆူတည်းသောသားတော် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားရမည်။ သင်၏အ ပြစ်ကို အသွေးတော်အားဖြင့် အမြဲဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါသည်။ သင့်အား အပြစ်ငရဲထဲက သူသာလျှင် ကယ်တင်နိူင်ပါသည်။ ယေရှုသာလျှင် သင့်အပြစ်ထဲက ကယ်တင်နိူင်သည်။ သင် သည် အကြံဥာဏ်ကိုအလိုရှိလျှင် ဒေါက်တာ Cagan နှင့် ကြာသပတေးညတွင် တွေ့ရန် ချိန်း ထားရမည်။ ချိန်းဖို့ရန်အတွက် သို့မဟုတ် ဤအစီအစဉ်အပြီးတွင် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပါတ် သက်ပြီး ဆွေးနွေးရန် အတွက် သူ့ကို ဖုန်းဆက်န်ိူင်ပါသည်။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဟေရှာယ ၆၄း ၁- ၃
"ရူပါရုံများကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ"၊ (Avis Burgeson Christiansen, ၁၈၉၅-၁၉၈၅) ရေးစပ်သည်။